Arsenal Oo Xiddig Chelsea Lasoo Saxaaxanaysa, Man United Oo Lagu Haysto Saxeex Ay Qarka U Saarnayd Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Maanta Oo Axad Ah - Gool24.Net
Arsenal Oo Xiddig Chelsea Lasoo Saxaaxanaysa, Man United Oo Lagu Haysto Saxeex Ay Qarka U Saarnayd Iyo Wararkii Ugu Dambeeyey Suuqa Maanta Oo Axad Ah
Arsenal ayaa diiraddeeda u leexisay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Chelsea ee Jorginho oo 28 jir ah, kaas oo ay ku doonayso in heshiis amaah ah ay kusoo qaadato saacadaha kooban ee ka hadhay suuqa iibka ciyaartoyga ee xagaagan. Gunners ayaa joojisay xiisihii ay u qabtay kubbad-sameeyaha Lyon ee Hossem Aouar oo 22 jir ah. (ESPN)
Laacibkta Tottenham ee Ryan Sessegnon oo 20 jir ah ayaa kusii jeeda kooxda horyaalka Germany ee Hoffenheim. (Mail)
Newcastle United, West Ham United iyo Crystal Palace ayaa ku tartamaya saxeexa laacibkii hore ee Arsenal ee Theo Walcott oo u ciyaara Everton, laakiin aanay muuqanin inuu boos ka heli doono kooxda tababare Ancelotti. (Teamtalk)
Manchester City ayaa qorshaynaysa inay dhexda u gasho heshiiskii Manchester United qarka u saarnayd ee Alex Telles, waxaana Pep Guardiola iyo kooxdiisu ay dalab xilli dambe ah gaadhsiiyeen FC Porto si ay ula saxeexdaan 27 jirkan reer Brazil. (90min)
Chelsea waxay iska diidday dalab amaah ah oo uga yimid Bayern Munich oo ka doonaysay Cllum Hudson-Odoi oo 19 jir ah, kaas oo ay la socotay doorasho ah in £70 milyan oo Gini ay ku iibsan karto xagaaga dambe haddii ay ku qanacdo. (Mail)
Laacibka khadka dhexe uga ciyaara Chelsea ee Tiemoue Bakayoko oo 26 jir ah ayaa sannad amaah ah ugu wareegaya Napoli. (Mail)
Barcelona waxay dalab £13.6 milyan oo Gini ah ka gudbisay 19 jirka difaaca dhexe uga ciyaara Man City ee Eric Garcia. Laacibkan reer Spain ayaan la ciyaarsiinin kulankii Sabtidii ay City barbarraha la gashay Leeds. (Mail)
PSG waxay wali ku raad-joogtaa xiddigga Tottenham ee Dele Alli oo ay ku doonayso amaah ay soo kordhisay lacagteeda, kaddib markii laga diiday dalabkii hore ee ay kasoo gudbisay 24 jirkan reer England. (Telegraph)
Manchester United ayaa tartan xooggan kala kulmi doonta kooxda Liverpool oo iyaduna doonaysa weeraryahanka reer France ee Ousmane Dembele oo Barcelona ka tirsan. (Sport)
AC Milan waxay doonaysaa inay lasoo saxeexato difaaca xulka Germany iyo kooxda Chelsea ee Antonio Rudiger, waxaanay 27 jirkan ku doonaysaa amaah. Sidaas oo kale, Tottenham ayaa amaah ku rabta laacibkan. (Calciomercato_
Juventus waxay wad-ahadallo kula jirtaa weeraryahanka Everton ee Moise Keane oo ay ku doonayso amaah. 20 jirkan ayay Juventus ka iibisay Everton sannadkii 2019kii.
Leeds United waxay dalab horumar ay ku samaysay lacagtiisa ay ka gudbisay laacibka khadka dhexe uga ciyaara Norwich City ee Todd Cantwell oo 22 jir ah, iyadoo hore looga soo diiday dalab £15 milyan oo Gini ah oo ay ka gudbisay. (Football Insider)
Manchester United ayaa £3.6 milyan oo Gini u bandhigtay kooxda heerka labaad ee Faransiiska ee Sochaux oo ay ka doonayso difaaca 16 jirka ah Willy Kambwala. (RMC)
Bayern Munich waxay qarka u saaran tahay inay £13.5 milyan oo Gini kagala wareegto Espanyol khadka dhexe ee reer Spain ee Marc Roca oo 23 jir ah. (Sport)
PSG ayaa xidhiidh la samaysay Ajax, waxaanay ka doonaysaa laacibka khadka dhexe ee reer Argentina ee Lisandro Martinez oo 22 jir ah. (AS).